Global Voices teny Malagasy · 10 Jona 2017
10 Jona 2017
Tantara tamin'ny 10 Jona 2017
Iran: Mahatsiaro Ilay Famonoana Faobe Tamin'ny Taona 1988 Ireo Fianakaviana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana10 Jona 2017
Faha-19 taona namonoana ny gadra politika Iraniana an'arivony izay nalevina tao amin'ny fasana faobe tao Khavaran tamin'ny taona 1988 ny 31 Aogositra. Nitsidika ny fasana misy ny zanany, ny rahalahiny, ny anabaviny izay nalevina tsy nisy anarana na famantarana ireo namana sy havan'ireo niharam-boina.
Iran: Manome Aingam-panahy Ny Zavakanto Ny Hetsi-panoherana
Manohy ny famoronana ny asakanto an-tserasera ny olom-pirenena Iraniana sy tsy Iraniana ho fanohanana ny hetsi-panoheran'ireo Iraniana manohitra ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 12 Jona tao Iran
Iran: Hetsika Sy Sarin'ny Mpikatroka Maitso
Loharanom-baovao lehibe ho an'ny fampahafantarana ny olana sy ny zava-tsarotra mikasika ny natiora sy ny tontolo iainana ao Iran ny bilaogy maitso. Mandray anjara mavitrika amin'ny fanentanana ireo bilaogera maitso mba hiarovana ny natiora sy ny biby.
Egypta: Navotsotra Ireo Mpizaha Tany Nalaina An-keriny
Afaka ireo olona miisa sivy ambin'ny folo, anisan'izany ny vahiny mpizaha tany nalaina an-keriny tao Egypta 10 andro lasa izay. Naneho hevitra momba izany ireo bilaogera.
125 Taona Ny Lalamby Egyptiana
Mankalaza ny faha 125 taonan'ny lalamby Egyptiana eto ilay bilaogera Egyptiana Zeinobia.
Egypta: Embona Shawerma
Misy ve ny tsiron-kanina sy ny fofon-kanina mijanona maharitra ela ao an-tsainao rehefa miova ny vokatra, ny tsiro, sy ny fofona ? Manontany momba izany fotsiny ity fandikanteny avy amin'ny tontolon'ny bilaogy Arabo Egyptiana ity.